Kulabanye abathi kumele kwakhiwe inkundla ezintsha kwele Zimbabwe kulandela ukuvinjwa kwenkundla zokudlalela imidlalo eZimbabwe yinhlanganiso yenguqu eyeConfederation of African Football ethi inkundla lezi kazifanelanga ukusetshenziswa ngamaqembu avela kwamanye amazwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZIFA, uBryton Malandule, uthi abalandeli bomdlalo kanobhutshuzwayo akumelanga basole inhlanganiso yeZIFA kuphela ngemva kokuba iCAF ilaye ukuba akulankundla kwele Zimbabwe elungele ukudlalela iqembu lesizwe elama Warriors.
Inhlanganiso yeCAF itshele inhlanganiso yeZIFA ensukwini ezisanda kwedlula ukuba inkundla yeBarbourfields, yona obekuyiyo yodwa okwakuthiwe isesimeni esingcono okokuthi ingabe isentshenziswa ngesikhathi kusalungiswa lokho okungalunganga, layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela.
UMalandule uthi inkinga ebhekane labanikazi benkundla, ikhansili yedolobho lako Bulawayo, yikuba ezinye izinto ezifunwa yinhlanganiso yeCAF abangeke benelise ukuzenza nxa kukhangelwa indlela inkundla yeBarbourfields eyakhiwe ngayo.
“IBarbourfields Stadium yayakhiwa ngo 1957, iNational Sports Stadium yayakhiwa ngo 1986, njalo asikaze siqhube inhlelo zokuthuthukisa lezinkundla ezizwayo. Okokuthi inkundla yeBarbourfields isingathuthukiswa ukuze ifike kuzinga elifunwa yiCAF akungeke kwenzakale. Sekumele kuyakhiwe eyinye inkundla okuyinto okumele ngabe kudala yenzakala ngoba kusukela ngo1957 kuze kufike lamhlanje koBulawayo akuzake kwakhiwe eyinye inkundla.”
Ngendlela inkundla yeBarbourfields eyakhiwe ngakhona vele ezinye izinto okuthiwa kumele zenzakale ezinjengokungezelela izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali akungeke kwenzakale loba sesiphiwe umnyaka wonke ukuthi kulungisiswe,” kutsho uMalandule.
Intathelizindaba yezemidlalo, uNash Mkokwayarira, uthi kumele kube lokukhulumisana okungcono phakathi kwenhlanganiso yeZIFA labanikazi benkundla ababalisa amakhansili amadolobho atshiyeneyo kanye lohulumende.
“Sanikezwa sibili indawo okwakumele sizilungisise kodwa akuzange kube lokulandelela kumbe ukuncedisana ngoba ngokubona kwami lokhu akusiwo mlandu wamakhansili kuphela loba owenhlanganiso ye ZIFA kodwa ngumlandu wesizwe sonke jikelele.
Ngibona angathi layo inhlanganiso ye CAF layo ingumaluma ephozisa ngoba ungathi uyakhangela kwamanye amazwe kulenkundla ezifana nje lenkundla eye Barbourfields njalo ukuyadlalela kwelinye ilizwe kuzakwenza abamabhizimusi abakuleli balahlekelwe kakhulu,” kutsho uMkokwayarira.
Idolobho lakoBulawayo lithi selikhulumisana leZIFA labanye ngokumele kwenziwe enkundleni yeBarbourfields Stadium. Ukungabi lendawo zokudlalela kumbe ukuzilolongela ludubo olubhekane labezemidlalo kwele Zimbabwe ngoba indawo abazisebenzisayo zingezikamasipala. Iqembu elabhidlikayo eleAmaZulu like laba lenhlelo ezokwakwa inkundla eyokudlalela endaweni yeCallies Sports Club kodwa lokhu akusayenzekanga ngemva kokubhuluba kwaleliqembu.
Iqembu leHighlanders lona liphezu komsebenzi owokuvuselela inkundla zalo zokuzilolongela endaweni elayiphiwa ukuba liyisebenzise okweminyaka elikhulu, eHighlanders Clubhouse. Isikhulumeli seqembu le Bosso, uRonald Moyo, uthi lokhu bakwenza ngoba bezama ukwehlisa indleko ezibhekane leqembu.
“Okwamanye senza okokubhadala kwezinye indawo nxa sifuna ukuzilolonga njalo lokhu kuletha indleko enkulu kithi ikanti kusifakela lemigoqo ethile ngoba sibhadalela leyondawo okwesikhathi esithile okuyinto eyenza kwesinye isikhathi singalolongi ngemfanelo.
Ukuba lenkundla zethu kuzakwenza lendlela iqembu lethu elidlala ngayo ithuthuke ngoba bazabe sebethatha isikhathi sabo besenza loba yini abafuna ukuyenza,” kutsho uMoyo.
UMalandule uthe inhlanganiso yeCAF ithe inhlanganiso yeZIFA kuzamele itsho ukuba umdlalo wabo okumele udlalwe leqembu leAlgeria uzadlalelwa ngaphi ngemva kokuthiwa inkundla yeBarbourfields layo kayilunganga.
Uqhubekele phambili esithi nxa sekuthe kwehlula ukulabhela kwabo kungangcono lumdlalo uqhutshelwe kwele South Africa ngoba iqembu lama Warriors likusibaya sinye lamaqembu akwele Zambia kanye lase Botswana.
IZIFA Ifuna Kwakhiwe Ezinye Inkundla Zenguqu eZimbabwe
Izakhamizi zeGwanda Ziphithizela Enzikini yeDolobho Zisiya Thenga Impuphu
Isibhedlela seThorngrove Infectious Diseases Sithola Uncedo Lokudla Lokunye